कल्पना पौडेल सोमबार, जेठ ५, २०७७, १९:५३
काठमाडौं- बाँकेको नरैनापुर यतिबेला कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या ५६ पुगिसकेको छ। २५ वर्षीय युवकको मृत्यु भइसकेको छ। सोमबार मात्रै ४७ जनामा कोरोना देखिएको छ। एकैदिन यतिधेरै संक्रमित भेटिएपछि यो स्थानबारे धेरैको चासो बनेको छ- किन त्यहाँ दिनदिनै संक्रमितको संख्या यसरी बढ्दैछ? धेरैको चिन्ताको विषय पनि छ, यो संक्रमण दर कति संख्यामा पुग्ला?
नरैनापुर गाउँपालिकाको जनसंख्या ४३ हजारको हाराहारीमा जनसंख्या छ। भारतबाट आउनेलाई राख्न त्यहाँ १३ क्वारेन्टाइन बनाइएका छन्। यतिबेला ८ सय १४ जनालाई सम्भावित संक्रमित भनेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिकाले‍ जानकारी दिएको छ।
क्वारेन्टाइनमा रहेकामध्ये अधिकांश भारतबाट आएका नेपालीहरू हुन्। नेपालगञ्ज सहरबाट ३५ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यो गाउँपालिका विकासको दृष्टिकोण पछाडि छ। बाँकेको राप्ती पारीको यो गाउँपालिकाका अधिकांस मानिस रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा जान्छन्। तीमध्ये धेरै त भारतको मुम्बई मात्रै।
विश्वभर कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिएपछि उनीहरुको रोजगारी गुमेको छ। लकडाउनका कारण रोजगारी नभएपछि धेरैजसो व्यक्ति विभिन्न तरिकाले गाउँ आइपुगेका छन्।
भारतसँग सीमाना जोडिएको यो गाउँपालिकामा धेरैजना लुकेर राती नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। नेपाल-भारती सीमा क्षेत्रको घना जंगल छिचोल्दै उनीहरु त्यहाँ आइपुग्ने गरेका छन्। भारतले केही दिनअघि रेल सञ्चालन गरेपछि स्थानीय गाउँमा आउने क्रम बढेको छ।वैशाख ३१ गतेभित्र आएका सबैलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको जनाएको छ।
कति त राती नै घरमा गएर लुकेर बस्ने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले अर्को दिन मात्रै थाहा पाएर क्वारेन्टाइनमा लैजाने गरेका छन्। यसले गर्दा त्यहाँ कोरोना जोखिमले कुन रुप लिने हो अनुमान गर्न मुस्किल परेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
नरैनापुर बाँकेको विकट गाउँपालिकमा मानिन्छ। भौतिक संरचनाको अभाव भएकाले सबैलाई गाउँपालिकाभित्रका १२ विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका अघिकांशको उमेर ३० वर्ष भन्दा कम छ।
नरैनापुरकै दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा रहेका २५ वर्षीय युवकको जेठ ४ गते कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भयो। त्यसपछि त्रास झन् फैलिएको छ।
नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा रहेका धेरैको अझै परीक्षण भएको छैन। वैशाख ३१ गते ४५ जनाको स्वाबको नमूना संकलन गरिएको थियो। जसमध्ये ८ जनालाई पोजिटिभ देखियो। उनीहरुको सम्पर्कमा आएका थप २ सय ६३ व्यक्तिको जेठ ३ गते स्वाब संकलन गरियो। फेरि छुटेका थप ११ जनाको पनि नमुना लिई कुल २ सय ७४ जनाको नमुना लिइएको छ। जसमध्ये एक जनाको रिपोर्ट नआउँदै आइतबार बिहान निधन भएको थियो। उनको मृत्यु भएपछि आएको रिपोर्टमा उनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
२ सय ६३ मध्ये नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा सोमबार १ सय ९० जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ४७ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। ८१ जनाको नमुना परीक्षण भइरहेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड-१९ फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले ३१ गतेभित्र आएका सबैको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।
नरैनापुरका पत्रकार नवीन गिरी भन्छन्, ‘नरैनापुर बाँकेको विकट ठाउँ हो। त्यहाँ भर्खर विकासका पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्। अन्य पूर्वाधार नभएकोले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। विद्यालयको पूर्वाधार समेत राम्रो छैन।’ गाउँपालिकाले सकेसम्म राम्रो प्रबन्ध गर्न खोजिरहेको तर, पनि विकट ठाउँ भएकाले सबै प्रबन्ध भनेजस्तो नभएको नभएको उनको भनाइ छ।
अघिल्लोपटक कोरोना देखिएका ८ जनालाई दाङमा उपचारमा लागि लगिएको छ भने आज पोजिटिभ देखिएका ४७ जनालाई नरैनापुर-२ मा रहेको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन बनाइ त्यहीँ राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
तर, स्थानीयले त्यहाँ राख्दा स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएमा थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजान समस्या हुने भएकाले नेपालगञ्जमै लैजानुपर्ने बताइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवा पनि शनिबार साँझसम्म स्वस्थ नै थिए। उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको तीन घण्टाभित्रै उनको मृत्यु भएको बताइएको छ।
सो क्वारेन्टाइनमा ती व्यक्तिको मृत्यु भएपछि ३८ जना व्यक्तिले अन्यत्र सार्नुपर्ने ढिपी लिएपछि आज उनीहरुलाई जयकिसन माविको क्वारेन्टाइनमा सारिएको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मो. मोइन खाँले उनीहरुलाई दिउँसै सारिएको बताए। उनीहरुको नमुना परीक्षण भइरहेको छ।